Mg Thant: Andriod OS သုံးထားတဲ့ ဆိုနီ Tablets တွေလာပြီ
Andriod OS သုံးထားတဲ့ ဆိုနီ Tablets တွေလာပြီ
SONY Table S & Tablet P
၂၀၁၁မှာ ပေါ်ပြူလာ အဖြစ်ဆုံး Gadgets ကတော့ စားပွဲတင်ကွန်ပြူတာလို့ ခေါ်ရမလားမသိတဲ့ Tablet Computer တွေပါပဲ... Apple ရဲ့ iPad 2, Samsung ရဲ့ Galaxy Tab 10.1 … ခု ဆက်မထုတ်တော့ဘူး ပြောကာမှ နာမည်ကြီးသွားတဲ့ HP ရဲ့ TouchPad တို့ဟာ ဒီနှစ်ထဲမှာ ပေါ်ပြူလာဖြစ်ကြတဲ့ Tablet တွေပါ။
သူတို့တွေ အားလုံးဟာ မတူညီတဲ့ OS တွေဖြစ်တဲ့ iPad2 က iOS 4, Galaxy Tab 10.1 က Google ရဲ့ Andriod 3.0 Honeycomb, TouchPad က WebOS 3.0 စတာတွေ သုံးထားကြပါတယ်။
HP TouchPad ကတော့ သူ့ကိုယ်သူ တခြား Tablet တွေကြားမှာ ရောင်းမကောင်းဘူး ထင်ပြီး ဆက်မထုတ်တော့ဘူးလို့ ကြော်ငြာလိုက်ပြီး လက်ရှိဈေးကို တော်တော်ချလိုက်ကာမှာ ရောင်းမလောက်ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်သုတ် ထပ်ထုတ်မယ်လို့ လေသံပစ်လာပါတယ်။
အခု အဲဒီ Tablet ပြိုင်ပွဲတွေကြားမှာ SONY က Andriod 3.0 Honeycomb based iPad အရွယ်အစားနီးပါးရှိတဲ့ Tablet S နဲ့ ခေါက်ချိုးပြီး သုံးလို့ရတဲ့ Tablet P တို့နဲ့ ထပ်ပြီး ၀င်ရောက်လာပါပြီ။
ဒီ SONY ရဲ့ Tablet တွေ ဘယ်လောက် စွံမလဲဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ SONY ကတော့ လာမယ့် မတ်လ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ ၂သန်းနဲ့ နောက်တစ်နှစ်လုံးထဲမှာ ၃.၂သန်းလောက်ထိ ရောင်းချနိုင်ဖို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်။
Tablet S ကို ဂျပန် ယန်းငွေ ၄၅၀၀၀နဲ့ စက်တင်ဘာ ၁၇ရက်နေ့က စပြီး ဂျပန်မှာ စတင်ရောင်းချမှာ ဖြစ်ပြီး Tablet P ကိုတော့ နိုဝင်ဘာလမှာ ဂျပန်မှာပဲ စတင်ရောင်းချဖို့ ကြော်ငြာထားပါတယ် Tablet P ရဲ့ ဈေးနှုန်းကိုတော့ မကြေငြာ ရသေးပါဘူး….
SONY Tablets များရဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကိုတော့ အောက်ပါ လင့်ခ်များမှာ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ။
ကိုဇော် September 2, 2011 at 9:19 AM
အဟီး . . Tablet လိုချင်နေတာနော်။
အခု ဆိုနီက ထပ်ထွက်နေပြီ ဆိုတော့ . . ဟီးဟီး ဈေးကျအောင် စောင့်ရတော့မှာပေါ့ :D
ကိုဇော် September 2, 2011 at 9:29 AM
အဲ . . . S ကို ယန်း ၄၅၀၀ နဲ့ ရောင်းမယ် ဆိုတာ ဟုတ်ပါ့မလား။
$ 59 လောက်ပဲ ကျတော့မှာပေါ့။ ၄၅၀၀၀ နဲ့များ မှားလား မသိ။
MGTHANT September 2, 2011 at 10:24 AM
ဟုတ်တယ် ကိုဇော် ယန်း ၄၅၀၀၀ ပါ။ အမှားပြင်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ Android based iPad အရွယ်အစား Tablet ကို ရှာနေတာ… ဆိုနီက ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလားပဲ… မျက်စိနဲ့ အပြင်မှာ သေချာတွေ့ရမှ ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်။
လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ 